Home News Howlgalkii W/Arrimaha Gudaha oo lasoo afjaray!!
Hay’adda Ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa shaaciyay in lasoo Afjaray Weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen xarunta ay wada degan yihiin Wasaaraddaha Arrimaha Gudaha iyo Amniga dowladda Soomaaliya.
Labo Qarax ayaa ka dhacay, halkaasi waxaana intaasi ka dib gudaha u galay dagaalyahano katirsan Shabaab.
Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in la toogtay raggii weerarka soo qaaday tiradooda aheyd 3 ruux.
Wasaaradda Warfaafinta ayaa sheegtay in hadda Ciidamada Ammaanka ay gacanta ku hayaan xarunta Wasaaradda.
Previous articleDEG DEG: Masuul Dowlada hore kaga Tirsanaa oo Qarax lagu dilay
Next articleSharciyada dalka u yaalla maxay ka qabaan Burburinta Meelo sidan u Dhisan si sharci ah? Halkan Ka ahkriso.
War Deg Deg ah:-Ciyaaryahan Hore oo Madaxweyne Noqday
Madaxweyne Muuse Biixi oo Mas’uuliyiin kala duwan xilal u magacaabay